Inweta ego site na bloggịọdịmfeịchụego kariaịmaliteazụmahịaomenala maịgaghịeleba iwu iwumkpochapụanya maọbụtinye maka ikikereụlọ.
Otu n’ime iwu iwukachasịmkpa madịmkpabụiwu nzuzo、nke ana-emetụtaweebụsaịtị、nnukwu maọbụobere。 Ọbụrụnaịbụobereazụmahịamaọbụọbụnadịブロガーna-enweghịego site na ebenrụọrụweebụgịmaejighịn’aka ihe kpataraụwanambụịga-achọotu、ịnwere ike ijuanya.
Oheredịelu nke naịga-adị（ọbụrụgodịnaịmaghịya）-ichikotaụdịozidịiche iche site nandịịbịagị、na-edebe hanchịkọta、maọbụna-egosipụtamgbasa ozi。 Makaọtụtụn’ime ihe omumendịa、oherendịdịeludịelu naachọrọkaịnwee iwu nzuzo.
1 Kedu ihebụNzuzo Nzuzo?
2 Tinye Nzuzo NzuzoGịn’ime Ebe Taa
Kedu ihebụNzuzo Nzuzo?
Iwu nzuzobụakwụkwọna-akọwaihe gbasara ozi nkeonweịnakọtarasite n’akandịụrụgị、otuịsi eji ya、na otuịsi edebe ya.
Ihe obula a choro bu dabere na iwu ma obu iwu ndi ozo。 Ọzọkwa、nkọwanke ihebụ "Ozi Nkeonwe" dịgasị、manaọna-agụnyeaha naadreesịemail、na mgbeụfọdụ、adreesịIP na kukinchọgharị.
Na ogeọmụma、databụegoọhụrụ。 Ozi nzuzo nkendịmmadụn’otu n’otu bara ezigbo uru nyendịmgbasa ozi、ụlọọrụ、nagọọmentị.
Taa、ọtụtụmba na-eleba anya na nzuzodịka ikikedịmkpa nkeụmụmmadụ、ha agafewokwa iwu iji chebendịmmadụsite n’iheọmụmahana-anakọtama jirina-enweghịihehemụmaha。 Iwu nzuzo nzuzona-achọkarịna onyeọbụlana-anakọtaozi nkeonwe site na ebenrụọrụweebụha ga-enwenkwupụtana otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Dịkaọtụtụiwu nzuzo、ịnwere ike ikpebi maọbụọbụnana-eme mkpesa maọbụrụnaịnakọtaozi nkeonwena-agwaghịndịọrụgị、maọbụmaọbụrụnaịme.
Iwu Nzuzo Australia（APPs） bụnchịkọtankeụkpụrụ13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe。 Dịkaụkpụrụndịa sidị、ịghaghịijikwa ozi nkeonwe naụzọa na-emeghe na nke a na-emeghe.
Ntuziaka nchekwa data nke European Union Data 1998 ekwu na onyeọbụlanhazi data nke onwe yaaghaghịime yan’ụzọziri ezi ma kwadoro。 Iji mee kanchịkọtadata weere yadịka iwu kwadoro、ga-anakọtadatananịmakaakọwapụtarankeọma、nke doro anya na nke ziri ezi.
Nzuzo UK na UsoroNtanetịElectronic 2003 na-egbochi ojiji nke kuki nateknụzụndịyiri ya nangwaọrụndịọrụọgwụlamandịọrụ1）doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2）enyewo nkwenye ha.
Iubena enyerendịọrụakaịmepụtaiwu nzuzo nanzọụkwụatọ：
Tinye aha njirimaraweebụgị,
Tinyeọrụ（ntụgharịGoogle Adsense）ịna-eji naụdịdataịna-anakọta,
*Pịaonyinyo iji gbasaa.
Ịmepụtanzuzo nzuzo naasụsụasatọdịiche iche maka ebenrụọrụweebụna ngwaọdịnalana-eji Iubenda（lee ngosi）.
Akụkụkasịmma nke iubenda-iwu nzuzogịka akwadoro na sava ha。 Nke apụtarana usoroahụnwere ikeịmepụtaederede iwu mgbeọbụlaiwu gbanwere.
Karịaọrụ600、gụnyereFacebook Like、Google Adsense、Google Analytics、ボタンLinkedIn、Twitter、Alexa Metrics、Amazon Associates。 edozi ya na usoro ozo.
Ndi Iubenda GDPRニケレ?
Azịzankwụsị-Ee。 Iubenda na-enyengwọtazuru oke iji soro GDPR.
Na ego nke $ 39 / mo（ouch！）、Usoroahụga-enyere aka：
Gosipụtaọkọlọtọkuki naịhapụkuki njirimaranaanịmgbe e nyere nkwenye、na
Sochie、ndekọ、ma weghachite njirimara onyeọrụnangwaọrụnchịkwaNzuzo.
Shopify na-enyengwáọrụdịmfe ebeịnwere ikeịmepụtankwụghachiụgwọna usoro nke iwuakarụmaka n’efu.
Ịnwere ikeịpị "Hụnaịga-achọikpe ikpe" igbe mamepụtaiwu nzuzogịn’efu.
Tinye Nzuzo NzuzoGịn’ime Ebe Taa
Ọbụezie naọnwere ikeịdịka nsogbu、iwepuakụkụadịmkpa nke bloggịnwere ike ibute nsogbun’ọnọdụ。 Reallychọghịiheọbụlaịchọrọka amachibido ya nanetwọkụMgbakwunyegịmaọbụịbụonye onyeyebịawebsaịtịna-agbaakwụkwọ.
Chebe onwegịsite na iji otu n’imengwaọrụndịdịn’elu ijimepụtaiwu nzuzogịugbu a、ịgaghịechegbu onwegị！うそろあはがえんえくわらị別名atamata onwegịnankọwabara uru na nzuzo onyeọrụ.
Njikọ ọsọ „Inweta ego“ svetainė dienoraštyje „gị ọ dị mfe ịchụ“ ego karia ịmalite
Njikọ ọsọ Inweta ego site na blog gị ọ dị mfe ịchụ ego karia
은 직식 Inweta ego site na blog gị ọ dị mfe ịchụ ego karia
A fost blog na-agbagharị gị black oge wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ
Bijis na-agbagharị emuārs gị nwa oge wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị
Buvo na-agbagharị internetinis dienoraštis gị nwa oge wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ